Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guam » Zute Mary Rhodes, dike ọhụrụ nke njem nlegharị anya si Guam, USA
Akụkọ mkpakọrịta • Awards • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Guam • Ajụjụ Ọnụ • News • Mgbasa Ozi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
A na -emeghe Hall of Heroes International Tourism Heroes site na nhọpụta naanị iji mata ndị gosipụtara ọpụrụiche pụrụ iche, ihe ọhụrụ na omume. Ndị dike njem nlegharị anya na -aga n'ihu.
Taa, ewepụtara onye dike njem nleta mbụ sitere na Guam n'ihu ọha. Gee nti n'etiti Hero Mary Rhodes, na onye isi oche WTN Juergen Steinmetz.
Mary Rhodes bụ onye isi oche Guam Hotel & Associationlọ oriri na ọ Resụ Resụ.
Mary Rhodes bụkwazi onye njem nlegharị anya, mgbe Danielle Arriola họpụtara ka ọ sonye na mmemme ahụ Ndị dike mba ụwa na -ahụ maka njem nlegharị anya by World Tourism Network.
Mary Rhodes abụrụla onye isi oche nke Guam Hotel na Restaurant Association.
Mary Rhodes si Guam, ụgbọ elu US Territory 7 awa si Hawaii, ma ọ bụ nkeji 90 site na Manila. Guam bụ ebe America na -amalite ụbọchị ya.
Mary Rhodes ekwu, sị:
“N'ụwa niile, mmetụta nke ọrịa na -efe efe emetụtala ahịa ndị njem. Dị ka ndị isi na ụlọ ọrụ ahụ, ọ dị anyị mkpa ịhazigharị nchekwa na ahụike nke obodo na akụnụba ka anyị na -akwalite atụmatụ na -adigide, na -eguzogide ma na -asọmpi n'ime mpaghara anyị. ”
"Ebumnuche ndị njem na -ebute ike na ike bụ njirimara dị mkpa na ijikwa nsogbu, ihe ịma aka na ohere nwere mmetụta na -apụtachaghị ìhè na njedebe anyị, ahịa isi mmalite na ụlọ ọrụ."
Juergen Steinmetz, onye isi oche nke World Tourism Network kwuru, sị:
“Obi dị m ụtọ ịhụ Mary ka ọ na -esonye n'ụlọ ezumezu ndị njem anyị. Ezigbo onye ndu, onye nyere aka nke ukwuu idobe onye agbata obi anyị na Pacific. N'otu oge ahụ ọ nwere ike idobe Guam ka ọ bụrụ njem na njem nlegharị anya. Ọ dị mma nke ukwuu! ”
N'ime afọ 2020 na 2021, Oriakụ Rhodes ebutela ọtụtụ atụmatụ n'oge ọrịa na -efe efe iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị bi n'obodo, na ndị ọrụ agha na Guam mgbe ha na -eje ozi dị ka onye na -ahụ maka ụlọ ọrụ njem na mpaghara na gọọmentị etiti. gọọmentị na -elekọta, na -ahazi ma na -eduzi mmemme na mmemme ndị a:
Ọ haziri nzukọ ọmụmụ ihe na -efe efe na Jenụwarị 2020 maka ndị njem na ndị ọrụ gọọmentị ime obodo na nke gọọmentị etiti na atụmatụ mberede, usoro ahụike na nchekwa, mmemme okpokoro, na ọzụzụ ọrịa.
Oriakụ Rhodes rụkọkwara ọrụ ọnụ na Ngalaba Ahụike Ọha na Ọha na Ọha na-ede ntuziaka ahụike ọha maka usoro ahụike na nchekwa Covid-19 maka ụlọ ọrụ njem;
O jere ozi na ebe a na-arụ ọrụ ihe mberede na Guam Homeland Security na Deparment of Public Health na Social Services n'ime afọ iri na ise gara aga (ọkachasị n'oge ọrịa Covid-15 na 19 na 2020) iji nọchite anya ụlọ ọrụ onwe ma jee ozi dị ka onye otu RAC. ma duru otu ESF abụọ maka nlekọta oke na ebe obibi na ebe.
Oriakụ Rhodes nyere aka n'oge ọrịa na -efe efe maka ndị njem na -abata maka ebe obibi na njem;
Ọ rụrụ ọrụ dị ka nkwekọrịta onye na -ere ahịa maka ichebe, ebe obibi, na ọrụ maka USS Roosevelt site na Machị ruo Julaị 2020, nke chọrọ njikwa ọrụ yana ụlọ oriri na nkwari iri na abụọ dị na GHRA iji lekọta na ichebe ihe karịrị ndị ọrụ na ụmụ nwanyị 12. gọọmentị etiti na ndị agha.
Oriakụ Rhodes bụ onye nlekọta nkwekọrịta nkwekọrịta onye isi na Ngalaba Nchebe;
Ọ duru ọtụtụ ụlọ ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi na saịtị nnwale na saịtị ọrụ maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ iji hụ na ịgba ọgwụ mgbochi Guam erutela mgbochi anụ ụlọ nke pasent 80 ma ọ bụ karịa. Dị ka onye isi oche nke GHRA, Oriakụ Rhodes rụkọrọ ọrụ nke ukwuu na Ngalaba Ahụike Ọha na Ọha na Ọha.
Oriakụ Rhodes bụkwa onye isi n'ịhazi ọrụ ụlọọgwụ na ụlọ ọgwụ iji na -ahazi mmemme na saịtị ndị na -ewe mmadụ n'ọrụ;
Oriakụ Rhodes nyere aka na ịmalitegharị ụlọ ọrụ njem na Guam Visitors Bureau na nnukwu ọrụ atọ:
(1) ndị ọrụ ụlọ ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi iji hụ na azụmaahịa nwere oke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa,
(2) kwalite mmemme Njem Nchedo WTTC ma gbaa ndị azụmaahịa ume itinye akwụkwọ nzere iji kwalite Guam dị ka ebe dị nchebe, yana
(3) kwalite ma zụlite mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na ezumike maka ndị pats ochie America na ndị sitere n'ahịa isi mmalite na-enweghị ohere ọgwụ mgbochi Covid-19 ma ga-aga Guam maka ịgba ọgwụ mgbochi.
Nke a ga-achọ ọnụnọ dị mkpirikpi ma ọ bụ ogologo oge dabere na nke ọgwụ mgbochi atọ ha họọrọ ka a na-enye: Jansen & Johnson, Moderna, ma ọ bụ Pfizer. Ha niile nwere usoro iwu siri ike dịka akụkụ nke mmemme ahụ;
Oriakụ Rhodes na GHRA duziri ọtụtụ ọzụzụ na ogbako ya na nchịkwa nchịkwa azụmaahịa (SBA) na Developmentlọ Azụmaahịa Obere iji kụziere ngalaba nkeonwe na mmemme gọọmentị dị iche iche na -erite uru na azụmahịa n'oge ọrịa.
Dịka ọmụmaatụ, PPP, EIDL, na Restaurant Revitalization Fund nke nwetara ọtụtụ nde dollar na enyemaka gọọmentị etiti site na enyemaka na mgbazinye ego.
Ọ mepụtara ọtụtụ ọzụzụ na ohere izi obodo gụnyere Economic Forum, seminarị na ogbako iji tinye ndị were n'ọrụ n'okwu metụtara Covid-19 dị iche iche gụnyere enyemaka enweghị ọrụ ọrịa, ego gọọmentị etiti, ọgwụ mgbochi n'ebe ọrụ, ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi, usoro ahụike na nchekwa. , wdg.
Mgbalị Oriakụ Rhodes na GHRA mere na mmekorita ya na Society for Human Resource Management na ọtụtụ NGO. Ọ gụnyere ụlọ ọrụ azụmahịa dị iche iche na Guam.
Oriakụ Rhodes jere ozi na otu ndị ọrụ na kọmitii ndụmọdụ n'okpuru Gọvanọ Guam, Guam Economic Development Authority, Guam Visitors Bureau, na Guam Department of Labour na -anọchite anya otu n'ime ọtụtụ ọgbakọ maka mgbake akụ na ụba, enyemaka enweghị ọrụ ọha, enyemaka maka obere azụmaahịa. , ọzụzụ, na ogbako
September 23, 2021 na 09: 50
Ọrịa na -efe efe iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị bi n'ime obodo, na ndị ọrụ agha na Guam mgbe ha na -eje ozi dị ka onye na -ahụ maka ụlọ ọrụ njem na gọọmentị ime obodo na nke gọọmentị etiti na -elekọta, na -ahazi ma na -eduzi mmemme na mmemme ndị a. Nke a na -amasị m nke ukwuu. Ọ bụ akụkọ na -enye nkọwa. Daalụ maka nke a.